वामपन्थीका लागि अस्तित्ववादी प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
देशमा अहिले चौतर्फी वामपन्थी मात्रै छन्,वामपन्थ खासै कतै छैन । तर पनि किन यति धेरै मान्छेले आफूलाई अझै वामपन्थी वा प्रगतिशील भनाउँछन्?
वैशाख ६, २०७८ विष्णु सापकोटा
त्यो प्रश्न के हो र त्यो अब किन बिझाउने प्रश्न भएको हुनुपर्छ भनेर सोध्ने त वर्तमानमा सक्रिय ‘वामपन्थी’ समुदायलाई नै हो । त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि, सन्दर्भ सरल बनाउनका लागि, सानो सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र इतिहासको स्मरण आवश्यक छ । मान्छे वयस्क हुँदै जाँदा उसका कस्ता धार्मिक वा सांस्कृतिक आस्था/झुकाव बन्छन् भन्ने बुझ्न सजिलो छ । हामी जुन धार्मिक समुदायमा जन्मिन्छौं, सांस्कृतिक पहिचान र आस्था आम रूपमा त्यतैतिरको हुन्छ । तर कोही व्यक्ति किन वामपन्थी बन्छ भन्ने विषय मानिसको जन्मसँग होइन, पछि विकसित हुने उसको चेतना र विवेकसँग जोडिएको हुनुपर्ने हो । त्यो चेतनाको आडमा, पहिले त एउटा व्यक्तिले आफ्नो समाज/देश/संसारका बारेमा केही कुरा नमिल्दो छ, जसलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न थाल्छ । त्यो सोच्ने क्रममा त्यतिबेला आफूले वरिपरि सुनेका/बुझेका राजनीतिक विचारधारा/वाद/सिद्घान्त/तरिकामध्ये एउटातिर उसको झुकाव हुन थाल्छ । समुदायमा संगठन गर्न आएका अग्रजको प्रशिक्षणको प्रभावमा कोही व्यक्ति एउटा विचारधारातर्फ आकर्षित हुन्छ, कोही अर्कातिर । साधारण झुकावबाट सुरु हुने धेरैको यो यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा व्यक्तिका विभिन्न संयोगले निर्धारण गर्छन् । तीमध्येका कोही नेता नै बन्छन्, कोही कार्यकर्ता, कोही समर्थक मात्र र कोहीपछि क्रान्तिका ‘गद्दार’।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत नामको निरंकुशता लादेपछिका २९ वर्षमा समाजका नयाँ पुस्ताका सचेत सदस्यको ठूलो समूह कसरी प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनमा सरिक भएको थियो भन्ने विषय वास्तवमै रोमाञ्चक छ । २०४६ सालसम्म जो वामपन्थी भएका थिए, ती वामपन्थी हुनकै लागि वामपन्थी भएका थिए । पछि ‘जनयुद्ध’ भनिएको माओवादी आन्दोलन पनि उक्त वैचारिक कालखण्डकै सशस्त्र अभिव्यक्ति थियो, जुन पछि तीव्र रूपमा विसर्जनको एउटै भँगालोमा मिसिन पुग्यो । अब मूल प्रश्न र विषयतर्फ आऔं। देशमा अहिले चौतर्फी वामपन्थी मात्रै छन्, वामपन्थ खासै कतै छैन । तर पनि किन यति धेरै मान्छेले आफूलाई अझै वामपन्थी वा प्रगतिशील भनाउँछन् ? राजावादी हुँदा पनि आफूलाई वामपन्थी नै भन्न मन गर्नेÙ हिन्दुवादी हुँदा पनि, दक्षिणपन्थी हुँदा पनि र सार्वजनिक रूपमै दलाल पुँजीवादी आदि–इत्यादि सबै हुँदा पनि किन उनीहरु आफूलाई वामपन्थी नै भन्न रुचाउँछन्?
अझै पनि केही कम्युनिस्ट नेताले ‘कम्युनिस्ट बिग्रियो भने यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ’ भनेको सुनिन्छ । त्यस्तो टिप्पणी सुन्दा के बुझिन्छ भने, कतिपय ‘वामपन्थी’ नेताहरु अझै पनि वामपन्थी हुनु भनेको छुट्टै चरित्रको मान्छे हुनु हो भनेजस्तो मान्छेको आधारभूत चरित्रलाई नै एकांगी रूपमा विश्लेषण गर्दारहेछन् । मानौं भ्रष्टाचार गर्ने एक खालका विचारधाराका मान्छेले हो । मानौं असंवैधानिक काम गर्ने, बिग्रियो भने बढी बिग्रिने कुरा वामपन्थीमा लागू हुन्छ । आफूलाई ‘वैज्ञानिक’ सोचको भन्नेहरुको यो बुझाइ समाज विज्ञानको हिसाबले अति अवैज्ञानिक छ । एउटा सिद्घान्तबाहेक अरू सबै अवैज्ञानिक हुन् भनेर सोच्नु नै (समाज) विज्ञानविरोधी तर्क हो । कुनै पनि मान्छे जति पनि बिग्रन सक्छ र ऊ जति आदर्शवान् पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि ऊ वामपन्थी भए यति बिग्रन्छ, लोकतान्त्रिक भए उति भन्नु भनेको हिन्दु भए मान्छेको चरित्र यस्तो हुन्छ वा गोरा जातिको भए यस्तो हुन्छ भन्नुजस्तो ‘रेसिस्ट’ बुझाइ हो । तर यस कुरालाई उनीहरुको बौद्धिक ग्रन्थि बन्दै गर्दा घोकेको ‘टेक्स्टबुक वामपन्थ’को ‘ह्याङओभर’ भनेर अहिलेका लागि माफ गर्न सकिन्छ ।
तर योभन्दा बढी गहन विषय अर्को छ, जो नेपालको अहिलेको राजनीतिको विवेकशून्यतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । ठोस प्रतिशतमा भन्न त राम्रै ‘सर्भे’ गर्नुपर्ला, तर सहजै के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, अहिले देशमा उपस्थित वामपन्थी कार्यकर्ता र समर्थकहरूका अधिकांश समूह ‘वामपन्थी’ बन्नुको पछाडि त्यहाँ कुनै वामपन्थी कारण नै छैन । जसरी कोही हिन्दु समाजमा जन्मेको व्यक्ति आफैं हिन्दु भइहाल्छ, २०४६ सालपछि वयस्क भएर वामपन्थी भएका अधिकांशको हकमा त्यही लागू हुन्छ । उनीहरु वामपन्थी दर्शनबाट प्रभावित भएर त्यता लागेका होइनन् । परिवारको कोही सदस्य वामपन्थी थियो, उसको प्रभाव पर्‍यो, नाता–कुटुम्ब र टोलछिमेकमा, अनि ती सबै स्वतः वामपन्थी भए । राजनीतिक चेतना र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भएर, विभिन्न विचारधारालाई केलाएर र तुलना गरेर वामपन्थी मिसनमा लाग्नेको संख्या बहुदलीय प्रजातन्त्र सुरु भएको कालखण्डमा अति कम छ । यो प्रश्न केलाउन किन महत्त्वपूर्ण छ भने, अहिलेका पार्टी र तिनका नेतृत्व जति नै भ्रष्ट र अयोग्य भए पनि किन कार्यकर्ता सधैं चुप लाग्छन् वा एउटा वा अर्को नेतासँग टाँसिइरहन्छन् भन्ने सवालको जवाफ पाउन यसले सघाउँछ ।
पञ्चायतकालमा लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी कुनै समूहतर्फ केवल समर्थन मात्र देखाउनु पनि ठूलो जोखिमको कुरा थियो । एक तहको प्रतिबद्धता र समर्पण नभई वामपन्थी वा कांग्रेस केही हुन पनि गाह्रो थियो । तर २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछिको उभार यस्तो थियो, आफू राजनीतिक रूपमा निस्फिक्री जता लाग्न पनि पाइने मात्र भएन, अलिकति पढेलेखेकाजति सबैजसो कि प्रजातान्त्रिक कि वामपन्थी कित्तातर्फ लाग्ने फेसन नै बन्यो । क्याम्पसमा भर्ना हुन एउटा विद्यार्थी संगठनलाई समात्नुपर्ने, अस्थायी जागिर पाउन होस् वा भएको जागिरमा सरुवा मिलाउन वा गाउँटोलमा आफ्नो ‘परिचय’ बनाउन कि एकातिरको हुनुपर्नेकि अर्कातिरको । त्यसक्रममा आफ्नो परिवारको कोही जता थियो, प्रायः त्यतै लागे । किन लागेको भन्ने सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक आदर्श वा आस्थाको खासै सम्बन्ध थिएन ।
केही बौद्घिक मनोवृत्तिका र ‘वामपन्थी’ हुनका लागि थोरै भए पनि वामपन्थी आदर्श कायम राख्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरुले सन्दर्भविशेषमा भन्ने गर्छन्,‘हामी वामपन्थी भएर त्यस्तो सोच्नु/गर्नु हुँदैन।’ त्यस्तो वाक्य प्रयोग भएको सुन्दा प्रश्न उठ्छ— के तिनीहरुले युवा वयदेखि प्रयोग गर्न अभ्यस्त शब्दावली स्वचालित रूपमा प्रयोग गरेका त होइनन् ? पंक्तिकारको प्रस्तावना नै के हो भने, अहिलेको नेपालमा वामपन्थी हुन र भनिनका लागि ‘वामपन्थी’ हुनैपर्दैन । कुनै वामपन्थीको व्यक्तिगत चरित्र, ऊभित्रको प्रगतिशीलता,समाजका मुद्दालाई हेर्ने उसको प्रगतिशील दृष्टिकोण आदिसँग नेपाली वामपन्थको अब खासै सम्बन्ध छैन । संयोगले, विम्बात्मक रूपमा भन्दा, सुरुमा पारिवारिक अभ्यास र संगतका कारण वामपन्थी भएका र पछि जीविकोपार्जनको सवालले जोडिएकाहरुको समष्टि नै अहिलेको नेपालको बहुमत वाम जनमत हो । त्यो जनमतले विष्णु पौडेल र रामशरण महतको बजेटमा अलिकति पनि फरक किन हुँदैन भनेर कहिल्यै सरोकार राख्दैन । हो, सरोकार हुने विशेष क्षेत्र छन् । पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिले चलाएका नाफामूलक अस्पताल, सहकारी र अन्य संस्थामा जहाँ आफ्नो जीविकोपार्जन जोडिएको छ । आफ्ना निजामतीदेखि पत्रकार हुँदै ‘प्रगतिशील’ लेखकदेखि अन्य पेसागत संगठनमा कसको भाग कति पर्छ भन्नेमा उनीहरुको सरोकार छ । त्यही सरोकार जोगाउनका लागि मात्र उनीहरु त्यहाँ छन् । त्यस्ता आबद्धता भएपछि वाम राजनीतिक संरक्षण पाइहालिन्छ । र आफूलाई प्रगतिशील भनेबापत करमा बरु छुट पाइएला, बढी तिर्नुपर्ने त कुरै भएन ।
नेपालका वामपन्थीहरुले अब कुनै राजनीतिक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने नै छैन । अब प्रश्न एउटै मात्र छ— नेपालमा वामपन्थी हुनु भनेको के हो ? एक–दुईवटा कुनै त्यस्ता चारित्रिक पक्ष छन्, जसलाई बोक्यो भने उसलाईवामपन्थी भन्न सकिन्छ? हैनभने, नेकपा (एमाले) भनेजस्तै अब भबिष्यमा अर्को कुनै पार्टी बनाए हुन्छ, जसको नाम नेकपा (कांग्रेस) हुनसक्छ । अथवा, ‘प्रजातान्त्रिक’ प्राध्यापक संघले आफूलाई प्रगतिशील भन्दा केही फरक पर्छ ? वा, प्रगतिशीलवालाले आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ भनेर? त्यसैलेआफ्ना नेता पथभ्रष्ट भए, पार्टीले बाटो बिरायो भनेर कार्यकर्ताले किन हस्तक्षेप गर्दैनन् भनेर गरिने प्रश्न एउटा‘नादान’ क्रन्दन मात्र हो । ती पार्टीका कार्यकर्ता कुनै आस्था र आदर्शका वाहक होइनन् । पार्टी कस्तो चरित्रको हुनुपर्छ भन्ने विषय तिनीहरुको चासोमै पर्दैन । तिनीहरुको चासो बस पार्टीमा छ, कस्तो पार्टी भन्नेमा छैन । त्यसैले ‘हामी वामपन्थी’, ‘हामी प्रगतिशील’ भनेर अझै पनि ‘टेक्स्टबुक’ वामपन्थको प्रभाव अवचेतनमा बोकेकाहरुले त्यो भनेको के हो भनेर आफैंलाई सोधे अलिकति आफैंसँग लाज लाग्ने थियो कि? र उनीहरु आफैंले अलिकति लाज मानेर त्यस्ता शब्द सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गरिदिए त्यो सुनेर लाज मान्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारलाई केही न्याय हुन्थ्यो कि?
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ १९:५४